Lasibatra ny Fanehoana Hevitra an-kalalahana Satria Natsahatr’i Venezoelà ny CNN Amin’ny Teny Espaniola · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Laura Vidal, Luis Carlos Diaz Nandika (en) i Kitty Garden, avylavitra
Voadika ny 09 Marsa 2017 7:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, English, Português, Español
“Ndao esorintsika ny onja fampiasan'ny CNN dia hivoaka ny kitapon-tsakafontsika.” Antsipirihany avy amin'ilay andian-tantara “Se acabaron los problemas” (Tapitra hatreo ny olana) an'i Eduardo Sanabria (EDO). Fampiasàna nahazoana alàlana.
Tamin'ny 15 Feb lasa teo no nifandona farany ny governemanta Venezoeliana sy ny CNN amin'ny teny Espaniôla, rehefa namoaka didy ofisialy ireo manampahefana avy amin'ny fanjakàna ny hanesorana ilay fantsona tsy ho hita any anatin'ireo foibem-pahitalavitra mandeha amin'ny tariby (cable) sy zanabolana.
Lazain'ny CNN fa ilay didy dia setrin'ny tantara “Pasipaoro anaty Aloka” navoakany, na pasipaoro antsokosoko, izay nanoloran'ilay tambajotra ny porofo fa nivarotra an-tsokosoko tamin'ny fomba tsy ara-dalàna fahazoandàlana sy pasipaoro tamin'ireo teratany Siriana sy Irakiàna ny kaonsily Venezoeliana.
Rehefa namoaka ny didiny, tsy nandefa fampilazana nitondra ho amin'ny fanakatonana ilay fantsom-pahitalavitra, ny Kaomisionam-Pirenena Venezoeliana misahana ny Fifandraisandavitra (Comisión Nacional de Comunicaciones, or CONATEL), dia nokianin'ireo mpanivana kosa ny CNN ho “nanodinkodina ny tena fahamarinana” ary mandrisika “ny fanafihana avy any ivelany”:
Io fanapahana io dia vokatry ny votoaty izay imbetsaka nalefa sy naverimberin'ny [CNN amin'ny teny Espaniôla]. […] Votoaty izay [mety hitambatra ho] fanafihana mivantana handrahona ny fandriampahalemana sy ny fitoniana demoakratikan'ny vahoaka Venezoeliana […]
Io dia vokatry ny zavamisy hoe manala baraka amin'ny tsy antony sy manodinkodina ny fahamarinana ry zareo nefa tsy misy zavatra mivaingana maharesy lahatra arosony, mitarika amin'ny fandrisihana ny mety hisian'ny fanafihana ny maha-masimandidy ny Repoblika Bolivariana ao Venezoelà.
Nampangain'ny minisitry ny Raharaha Ivelany, Delcy Rodríguez, ilay fantsona ho miaraka miasa amin'ny tafika Amerikàna ary manao fampielezankevitra ho an'ny tafika eny anaty media hamelezana an'i Venezoelà.
Ambonimbony ihany ny fifoterany tao amin'ny media sôsialy, indrindra taorian'ny nanambaràn'ny CNN amin'ny teny espaniôla fa mety handefa maimaimpoana ny fandaharany ao amin'ny Youtube ry zareo. Marobe tamin'ireo mpampiasa aterineto no namaritra io hetsika io ho toy ny eso tsara petraka ho an'ny ezaka fanivànana ataon'ny governemanta:
Na ireo tsy nijery CNN aza izao dia hahita azy, ary maimaimpoana. Isaorana anareo CNN amin'ny teny Espaniôla ny fitiavanareo an'i Venezoela.
Niarahaba ilay hetsika natao hanoherana ny CNN ny hafa, tamin'ny fanehoany ahiahy momba ny ho vokatry ny fandaharana sasany alefan'ilay tambajotra, toy ilay “Pasipaoro anaty Aloka.” Ny fandrakofana tahaka io, hoy ireo mpanakiana, dia manamarina ireo ahiahy hoe mikononkonona fanohanana fanafihana avy any ivelany atao ao Venezoelà ny CNN.
Nandefa ity hafatra manaraka ity tety anaty serasera i Luigino Bracci Roa, mpampiasa Facebook :
Ry namana, fantatro fa mety ho toy ny tafahoatra no fahitàna ny fepetra noraisina ho an'ny CNN. Saingy tsy noeritreretinareo ho tena olana goavana ve ny fandaharana “Pasipaoro Anaty Aloka” nalefan'i Fernando del Rincón tamin'ny herinandro lasa? Niampanga an'i Venezoelà izy ireo hoe MIVAROTRA PASIPAORO gaboraraka ho an'ireo “mpampihorohoro” Hezbollah, mba hanao FANAFIHANA AO ETAZONIA […] TOA TSY OLANA GAOVANA HO ANAREO VE IZANY? Tsy tsaroantsika ve ny nitranga tany Iràka sy Libia? Raha tsy horesahantsika aza ny hoe mety hanao sa tsy hanao fanafihana an'i Venezoelà i Trump, mbola tena ilaina foana ny mihetsika manohitra ireny karazana fanaratsiana ireny.
Felaka iray hafa atao amin'ny fahalalahana maneho hevitra
Ho an'ny maro mampiasa ny aterineto ao Venezoelà, mampiseho fotsiny ny ezaka farany mba hanivànana ny media sy haneriterena ny fampitàna vaovao ireo hetsika ataon'ny governemanta:
Sariitatra EDO ho an'ny @ElNacionalWeb: Tadiavo ny diso 4. Nodakàn-dry zareo nivoaka ny trano ny CNN.
Raha nanambara ny handingana ny sivan'ny televiziona Venezoeliana ny CNN, amin'ny alàlan'ny fandefasana maimaimpoana ao amin'ny aterineto, nilaza ihany koa ny CONATEL fa miomana hametraka teritery amin'ny fahafahan'ilay tambajotra mampiasa ny aterineto. Sakana iray hafa goavana ny fifandraisana aterineto efa milona be amin'ny ankapobeny ao amin'ny firenena, izay singa goavana amin'ny fanivànana nasionaly ary mahavoa maro kokoa fa tsy ny CNN monja.
Raha ny marina, ry zareo Venezoeliana no manana ny vitsivitsy amin'ireo fifandraisana mihisatra indrindra sy tsy azo antoka indrindra ao amin'ny tanibe.
Lasa lavitra noho ny sivana
Lasa vao mainka sarobahana kokoa ny olana rehefa jerenao ny fanarahana maso henjana ataon'i Venezoela amin'ny fanakalozana vola vahiny. Ambaran'ireo orinasa misahana fifandraisandavitra ao amin'ny firenena fa ny tsy fahampian'ny vola dolara dia manohintohina ny kalitaon'ny tolotra sy ny fahaveloman'ireo orinasa. Tamin'ny Aprily 2016, nitaraina ireo orinasa misahana fifandraisandavitra hoe zavatra iainkinan'ny ainy ny vola vahiny handoavana ny fifandraisana mandalo amin'ireo mpanome tolotra, izay mila 18 volana ny fankatoavana azy.
Ireo orinasa ireo ihany koa no miteny fa manasarotra azy io ireo fameperana amin'ny fividianana na fanafarana entana, na indraindray tena tsy misy azo atao mihitsy, mba hikarakaràna ny fitaovana ilaina hiasàna.
Mampihena ny isan'ireo fantsona mpizara vaovao tsy miankina amin'ny governemanta Venezoeliana ny fialàn'ny CNN tsy ho hita intsony ao Venezoelà. Nalaina ho fananam-pirenena ny ankamaroan'ireo media Venezoeliana famoahana vaovao, novidian'ireo rantsana mifandray amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna, na nahenan-dry zareo ny votoatin'ny vaovao mba hijanonana ho velona eo ambanin'ireo tsindry ara-politikan'ny Chavismo.
Na toy ny hoe fahafatesan'ny CNN teny anatin'ny fahitalavitra Venezoeliana aza io, io no fotoana voalohany nisian'ny fifandonana mafy tamin'ilay tambajotra sy ny governemanta. Tsy isalasalàna fa manana ny hadisoany ilay tambajotram-baovao alefa tariby, saingy na ny vaovao iray mitanila aza dia manome tombontsoa ao anatin'ny rafitra iray faran'izay mikatona sy andihizan'ny fanjakàna ao Venezoelà. Indrisy, na io soritry ny fahamaroana io aza dia mihosom-bovoka miaraka amin'ilay fanapahankevitra hanapaka ny CNN tsy handeha intsony.